बैंकहरु प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थ बढाउन गर्दैछन् तछाडमछाड, कसको कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौं : सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जसमा अधिकांशको नाफा गत वर्षभन्दा बढेको छ । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले ब्याज आम्दानी, सञ्चालन नाफा र लगानी पनि बढाएका हुन् । तर, यसपटक धेरैको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थमा भने तुलनात्मकरुपमा गिरावट आएको छ ।
पुँजी बढे अनुपातमा अझै अपेक्षा अनुसार नाफा हासिल गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थ दबाबमा परेको हो । विस्तारै बैंकहरुले अब यो २ वटा महत्वपूर्ण सूचकमा पनि सुधार गर्दै लैजाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंकहरुको प्रगति सूचकमा प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्दा थुप्रै सूचकांक मध्ये यी २ सूचकलाई पनि राम्रै ख्याल गरेका हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले गत वर्षको तेस्रो त्रैमास र चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ कस्तो रहेको छ भनेर तुलनात्मकरुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिसेयर नेटवर्थ कसको कति
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेप्सेमा सुचिकृत २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी नविल बैंकको ४६ रुपैयाँ ८३ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी देखिएको छ । तर, यो गत वर्ष भन्दा ११ रुपैयाँ ३९ पैसा थोरै हो । गत वर्ष नबिलको प्रतिसेयर आम्दानी ५८ रुपैयाँ २२ पैसा थियो । यस्तै, नेपाल बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी पनि यस त्रैमाससम्म आइपुग्दा ४२ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम भएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा २ रुपैयाँ ४ पैसाले थोरै हो । गत वर्ष तेस्रो त्रैमासमा ४४ रुपैयाँ ९७ पैसा थियो । एनआईसी एसियाको पनि २६ रुपैयाँ ६ पैसाबाट १५ रुपैयाँ ४० पैसामा झरेको छ । यस्तै एभरेष्ट बैंकको पनि ४४ रुपैयाँ ९५ पैसाबाट घटेर २९ रुपैयाँ ९६ पैसामा आइपुगेको छ ।
यता, केही बैंकहरुको भने प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भएको छ । जसमध्ये एसीसीको १० रुपैयाँ ६३ पैसाबाट बढेर १५ रुपैयाँ ४८ पैसा पुगेको छ । सिभिलको पनि ४ रुपैयाँ ५२ पैसाबाट बढेर ८ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ । अन्य कतिपयको मध्यमस्तरको देखिएको छ ।
गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा नेपाल बैंक, एनसीसी, मेगा, सिभिल, कुमारी, प्रभु, एनएमबि, बैंक अफ काठमान्डू र प्राइम कमर्सियल बैंकले प्रतिसेयर नेटवर्थ बढाएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकको ३७ रुपैयाँ २५ पैसाले बढेको छ । गत वर्ष १३७ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको नेपाल बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ यो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १७४ रुपैयाँ ३१ पैसा भएको छ ।
त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा लक्ष्मी बैंकको सबैभन्दा बढी ११० रुपैयाँ ६८ पैसाको गिरावट आएको छ । गत वर्ष २३७ रपैयाँ ०६ पैसा रहेको प्रतिसेयर नेटवर्थ यो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १२६ रुपैयाँ ३८ पैसा मात्र छ । अन्य कतिपय बैंकहरुको पनि नेटवर्थ घटेको देखिन्छ ।
तर, छोटो समयमा भारीमात्रामा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्दा तत्कालका लागि बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी र नेटवर्थमा दबाब खेप्नुपरे पनि विस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा देखिएको छ । बैंकहरुका अन्य महत्वपूर्ण सूचकहरु सुधार हुँदै गएकाले निकै आशावादी हुने अवस्था छ ।
महिला उद्यमशीलता सम्मेलन आयोजना हुँदै, सञ्जाल विस्तारमा जोड
सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य घट्यो, सेयर लगानी कति ?
नागरिक लघुवित्त मर्जमा जाने, सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिन विशेष साधारण सभा
लगानीयोग्य नगद अभाव हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले आजै १५ अर्ब बजारमा पठाउँदै
सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्कीमको न्याभ १० पैसा घट्यो, नेपाल बैंकमा धेरै लगानी
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी भन्छन् : कल डिपोजिटलाई क्रमशः निरुत्साहित गरिनेछ